केपी ओली फुटतर्फ अग्रसर हुनुभयो : उपाध्यक्ष गौतम
बार्सिलोनालाई हराउँदै रियल शीर्ष स्थानमा
नगरकोट क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रणमा (तस्बिरसहित)
लिभरपुलको पुनरागमन जित
पीएसजीको सहज जित
विपक्षी बजेट निकासाको जवाफ माग्दै, सरकार हिउँदे अधिवेशन नै स्थगन गर्ने तयारी थाल्दै
फर्निचरमा आगलागी, अझै नियन्त्रणमा आएन
सिरहामा गोली हानेर व्यवसायीको हत्या
असहाय तीन परिवारलाई घर हस्तान्तरण
विद्युत्को प्रतीक्षामा कालीकोटवासी
बाह्रखरी - बिहीबार, मंसिर १८, २०७७
काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले केपी ओली फुट र विभाजनतर्फ अग्रसर भएको बताएका छन् । बिहीबार निवासमा भेट्न आएका युवा विद्यार्थीसँगको कुराकानीमा नेता गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमले बैठकमा दुईजना अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै दस्तावेज पेस भएको बताउँदै ती प्रस्तावहरू छलफलद्वारा टुङ्गो लगाइने बताएका थिए ।
“प्रधानमन्त्री ओली बैठकमै नआउने, बैठक बहिष्कार गर्ने यो कम्युनिस्ट विधि, आचरणअनुसार भएन । उहाँ बैठकमा आउनुपर्छ । बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ । आफ्नो मत राख्नुपर्छ । अरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ,” उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बाह्रखरीसँग भने ।
ओलीलाई बैठकमा भाग्न, बहसबाट भाग्न छुट नभएको उपाध्यक्ष गौतमको निष्कर्ष थियो । पार्टी मिलाउनु पर्ने तर मिल्ने दिशातिर नगएको भन्दै भेटमा उपाध्यक्ष गौतमले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए । उनले अहिलेको गत्यावरोधको कारक ओलीनै भएको बताएका थिए ।
“प्रधानमन्त्रीको शैली हेर्दा पार्टी मिलाउनुपर्छ । एकता बचाउनुपर्छ भन्ने छैन,” उपाध्यक्ष गौतमले युवा–विद्यार्थीलाई भनेका थिए, “सङ्कटकाल लगाउने, संसद् विघटन गर्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभएको छ ।”
पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजान भूमिका खेल्नुपर्नेमा ओली अर्को बाटो हिँड्न खोजेको गौतमको आरोप थियो ।
फुटबाट जोगाउनका लागि छलफल शुरु गरेका छन् । गौतम निवास भैसेपाटीमा मंसिर १८ गते नेता गौतमले युवा विद्यार्थीसँग छलफल गरेका हुन् ।
गौतम निवासमा तामाङका अतिरिक्त तिलकराज भण्डारी, पञ्चा सिंह, विजय पौडेल, दिपेश पुन, माधव पन्त, सुदीप शर्मा, दीपक बुढाथोकी, कमल ढुंगाना, गोविन्द श्रेष्ठ, डा. निश्चल गुप्ता, नरेश न्यौपाने, समित थापा, दिनेश लो, सुमन आचार्य, सञ्जिव देवकोटा, केदार बुढाथोकी, सुरेश पराजुली र ओसिम अलामलगायत विद्यार्थी नेताहरू छलफलका लागि पुगेका थिए ।
बिहीबार, मंसिर १८, २०७७ मा प्रकाशित
विराटनगर । तत्कालीन नेकपा विवादका कारण १ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक लामो समय चल्न सकेन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार... ३ घण्टा पहिले
सरकार ढाल्न खोजेका छन् तर पनि पिर छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले उद्योग व्यवसायलाई अघि बढन बाधा पार्ने कानुनी प्रावधान र विलम्बकारी प्रशासनिक प्रक्रियालाई बदल्ने... ५ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री नै भन्छन्– लकडाउन नहुने के ग्यारेन्टी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सावधानी नअपनाए फेरि पनि लकडाउन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । काठमाडौंमा शनिबार भएको कार्यक्रममा... ६ घण्टा पहिले
स्कुल, कलेज कम्तिमा तीनसाता बन्द गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कम्तिमा तीनसाता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं, पोखरासहितका विभिन्न स्थानमा... ७ घण्टा पहिले
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल विजयी, कसले कति मत पाए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल विजयी भएका छन् । उनले निर्मला शर्मालाई तीनहजार बढी मतले पराजित गरेका... ८ घण्टा पहिले
चुनावको तयारी थाल्न सीके राउतको निर्देशन, कार्यक्रमस्थलमा स्वतन्त्र मधेसको झन्डा प्रदर्शन
जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अगामी चुनावको तयारी थाल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । शनिबार जनकपुरधाममा... १३ घण्टा पहिले
महामारीसँग खेलाँची नगराैँ !
म्यानमार नरसंहार : लोकतन्त्रको ठूलो उपहास
शुक्रबार, चैत २७, २०७७
आर्ट र फुडको संगम ‘विद्रोह’ सोमबार, चैत ९, २०७७
त्रिदेशीय टी–ट्वान्टीपछि एकदिवसीय सिरिज हाम्रो योजना हो
प्राथमिक उपचार नपाउँदा अधिकांश जलेका बिरामीको मृत्यु शुक्रबार, चैत २०, २०७७
दीपक–दीपासँग भेट भइरहन्छ तर विवादबारे कुरै हुँदैन